Afaka manome ahy famintinana ny tranonkala SEO ve ianao?
Ity misy lisitra fohy hatao na seha-pehezanteny SEO mila ilainao amin'ny fahitana tsara kokoa ny tranonkala amin'ny serasera amin'ny Google SERP. Mariho anefa fa tsy misy ny tranonkalan'ny SEO manerantany mba hampifanaraka azy rehetra, nefa manantena aho fa hanampy anao hanao ireto: 1)
Ny pejy web anao dia manome toky tsara indrindra sy ny votoatiny informatika manankarena amin'ny teny fototra fototra tianao. Tadidio fa mikaroka ny votoaty an-tsoratra ao amin'ny tranonkala tsirairay ny motera fikarohana mba hahazoana fanapahan-kevitra - cost of setting up a local area network. Rehefa mieritreritra fa ny mpikaroka dia afaka "mamaky" sy "mahatakatra" ny votoaty an-tsoratra afa-tsy fotsiny, dia ataovy azo antoka fa tsara daholo ny sora-tanana amin'ny asa soratrareo.
Ny fikarohana momba ny fikarohana dia singa fototra ao amin'ny seho Summary momba ny SEO. Ilaina ny mitady ny teny fikarohana mety indrindra amin'ny lohahevitry ny tranonkalanao ary matetika ampiasaina amin'ny mpihaino vondron'ny mpamakinao. Raha jereko ny tranonkalan'ny fampahalalam-baovao mahazatra indrindra, dia soso-kevitra ny hisafidy ny 3 hatramin'ny 5 ireo teny fototra misy vondron'olona mba hanaovana fanatsarana, ary koa ny teny fanalahidy lava sy ny fehezanteny manan-danja. Voalohany indrindra, tokony hitazona ny pejin-tranonao ho toy ny volavolan-dàlana voajanahary ianao, raha toa ka tokony ho tafiditra araka izay azo atao ny teny fototra tianao.
Ny zavatra tokony hatao dia ny manasongadina ny teny fototra ampiasainao ho an'ny fanatsarana. Eto aho dia tokony hiasa eo amin'ny pejin-tranonao ianao mba hahazoana antoka fa mifanentana tsara amin'ny votoatinao ao anaty izy ireo raha ampidirina amin'ny teny filamatra iray farafaharatsiny mba hahitana ny endri-tsarimihetsika tsara kokoa. Raha jerena ny marika meta mety, dia manoro hevitra aho ny mampiditra ny marika famantarana ny lohataona hatramin'ny tarehiny hatramin'ny tarehintsoratra hatramin'ny 70, ary ny marika famaritana meta izay misy manodidina ny 155 tarehimarika (ao anatin'izany ny habaka). Afaka malalaka ianao hampiditra ireo teny fototra vondron'olona ifandrimbonana na sora-baventy izay mila fampiroboroboana. Amin'izany fomba izany, ataovy izay hahazoana antoka fa tsy fohy loatra ny famaritana ataonao momba ny meta ary mitazona ny fiaraha-miasa amin'ny fotoana iray.
Raha ny marina, ny fikarakarana tranokala mifandraika amin'ny tranokalanao dia anisan'ny fototry ny fotodrafitrasa tsara indrindra. Manana rohy maromaro mampifandray ny pejinao amin'ny tranonkala malaza sy be mpampiasa. Raha manao izany ianao, dia hanome Google ianao sy ny sisa amin'ireo fitaovam-pitadiavana toa an'i Yahoo sy Bing ho famantarana mahery vaika fa ny pejy web anao dia manome lanja kokoa ho an'ireo mpampiasa farany, noho izany dia mendrika ny toerana ambony kokoa ao amin'ny lisitry ny SERP. Mba hahazoana tombontsoa lehibe amin'ny fanorenana rohy amin'ny ankapobeny, manoro hevitra aho mba hampiasa ny rohy fanoroana azy mba ho tafiditra ao anatin'ny votoatin'ny pejy misy anao. Amin'izany fomba izany, ny tranonkalanao dia mety hitombo avo kokoa, amin'ny ankapobeny noho ny fihenan'ny sidina clic.
Sitemap sy Directory Fanontana
Azoko atao ny mamarana ity famintinana SEO ity miaraka amin'ny sitemaps sy ny lahatahiry. Voalohany, ampiasao sitemaps mba hanampy amin'ny fikarohana karazana botsara manana navigate tsara kokoa manerana ny pejyo ho an'ny tanjon'ny fanoratana, ary koa ny traikefa amin'ny mpampiasa kokoa. Farany, aza adino ny hameno ny tranokalanao amin'ny fandefasana ny finday, toy ny Google My Business sy ireo lisitra hafa rehetra eo an-toerana na malaza sy manan-danja. Raha vantany vao voarakitra ao amin'ny lisitra mety ianao, hahafantatra bebe kokoa momba ny tranonkalanao momba ny fampiroboroboana fanampiny ao amin'ny lisitry ny fikarohana an-tserasera ireo mpamorona karoka.